Unqume ukushintsha evuthayo ithawula wesitimela. Ukuze kufezekiswe le isifiso akunzima, ngoba unezinketho ezimbili kuphela:
umeme kababuyele, ngulowo lalowo
Manje kudingeke ukuba anqume ukuthi uyobeka wesitimela ithawula. Kukhona izinketho ezimbili nazo:
Qhathanisa kubo akudingekile. Ukukhetha kwenziwe, kusukela izimfanelo lobuchwepheshe izakhiwo, kanye ukusondela of amapayipi , amanzi ashisayo noma amanzi ashisayo bafudumale. Njengoba intengo nekubona yinkimbinkimbi ukufakwa, ukunikeza bakhethe omunye wabo.
Ezimweni eziningi, ithawula amanzi setha. Intengo amadivayisi enjalo ifaniswe ne kagesi.
Kodwa inzuzo enkulu kuba ukushisa yabo ukudluliswa uketshezi for ukusetshenziswa lapho le njongo akudingekile ukuthi akhokhe.
Thenga esitolo evuthayo ithawula wesitimela. Ukufaka ngeke kuthathe isikhathi esiningi. Omunye kumele khumbula ukuthi ngaphambi kokukhipha iyunithi ubudala futhi ukufakwa namanzi entsha kuvaliwe ngempela.
Yimaphi amathuluzi nezinto zokwakha ezidingekayo?
evuthayo ithawula wesitimela;
Welding umshini ngabo;
ummese ukusika ipayipi;
nokufakwa futhi couplings;
Ngaphambi ukukhweza ithawula ukufudumala, kufanele ususe ubudala ufake dlula jumper nebhola valve, Welding umkhiqizo polypropylene amapayipi.
Kungani amakhosi abaningi kangaka bekhetha polypropylene amapayipi?
Okokuqala, kukhona ukukhanya. Okwesibili, musa adle, zishibhile. Futhi okubaluleke nakakhulu, abamdingi besiyoba sikhulu Welding umshini umhlangano.
A fibre-kwagcizelela ekhethekile, amapayipi enjalo zinamandla futhi sikhuthazela okushisa okukhulu.
Ngakho, sithatha sesikuzuzile evuthayo ithawula wesitimela. Ukulifaka ngeke eziyinkinga.
Ukuba khona nokufakwa ezihlukahlukene kwenza kube nokwenzeka ukuba ngokukhululekile hlanganisa polypropylene zensimbi amapayipi. Mount kubo silula. Ngenxa yalezi zinjongo, lapho eziklanyelwe idivayisi Welding.
Indlela ukuxhuma amanzi ukufuthelana ithawula wesitimela? Ukulifaka ilawulwa SNIP №204-01-85. Imikhawulo dryer ithawula exhunywe ne imikhono plastic design. Kulokhu, kubalulekile ukuba acabangele emthambekeni ipayipi kwamanzi ukuze evuthayo ithawula wesitimela. Okwenza kube esezansi ledzingekako emanzini ashisayo bese uvumela ume mm ububanzi 6-12 kulo liner.
Amanzi kufanele egeleza evuthayo ithawula yokubeka kusuka phezulu phansi, ngakho supply kumele ixhunywe yesikhuphukeli uphondo engenhla.
Imithetho alawulwa futhi eziseceleni esiphezulu ukuze usinde phakathi lisebenze efakwe, nogange. Ukuze ipayipi kwesigaba ngaphezu kuka 23 mm - kuba 35 kwangu, futhi ububanzi asisikhulu kunenkosi 50 mm - 23 mm.
Ukuze ukhulule odongeni kwemithamo ngokweqile, okuyinto zikhona ukusonteka ezishisayo namapayipi ashisayo, yonke Uhlelo kuvikelwe Akunzima, kodwa struts ukwesekwa (kubakaki).
Ngemva kokuphothulwa kudivayisi obandayo ihlola uxhumano. Uma eyomile ke kulungile.
Lokho Nyalo kumele ube brand new evuthayo ithawula wesitimela. Ukufakwa akuthathi isikhathi eside, akunjalo?
Uphethiloli trimmers: simo the best. Benzotrimmery (trimmers) ukunikeza: amanani, ukubuyekezwa
Yini ikhalori sitrobheli, nokuthi lokho izifo isetshenziswa